Zucchini juputara na tuna na chiiz | Ntụziaka nri
Maria onyekwere | 30/05/2021 10:00 | Ntụziaka dị mfe
Taa, m na-agba gị ume ịkwadebe uzommeputa anyị na-ejikarị n'ụlọ iji mezue nri abalị anyị: zukini juru na tuna na chiiz. Ihe zucchini a na-eri na-abụ ezigbo akụ, dị mfe ma dịkwa ọsọ. Ma ọ bụ na isi nri anụ nke ndị a na microwave anaghị ewe ihe karịrị nkeji anọ.
Na ngwa ndakwa nri? Tupu anyị mee ya na oven, mana ebe anyị nwetara microwave, oge ọ bụla a gwara anyị ka anyị jiri ngwa a sikwuo nri. Ọ bụkwa ụzọ dị mfe iji mee ya. Ọ bụ ezie na i kwesịghị ọsọ ọsọ; Ha na-apụta na elu okpomọkụ otú ị ga-echere a di na nwunye nke a nkeji iji tọhapụ anụ na-enweghị ọkụ onwe gị.
Ozugbo zucchini bupụrụ ị nwere ike jupụta ha ọtụtụ ihe na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ. Oge a anyị na-agba nzọ na ijikọta zukini na yabasị, tuna, tomato na chiiz. Think chere na ọ bụ a Nchikota iri? A ikpeazụ gratin na ha ga-adị njikere ije ozi.
Ndị a Cheesy Tuna Stuffed Zucchini bụ ezigbo nri abalị ọzọ. Mfe na ngwa ngwa ịkwadebe, ejiri m n'aka na ị ga-emeghachi ha.
Oge niile: 25 m
1 nnukwu zukini
1 yabasị ọcha
Mkpọ 2 nke tuna tuna
1 tablespoon tomato ihendori
Anyị na-asa zukini nke ọma, belata ha na ọkara ogologo ma buru ha ngwa ndakwa nri na kacha ike ruo mgbe juu; ihe dị ka nkeji 4. Mgbe emechara, anyị na-ewepụ ya n’ọkụ ma hapụ ya ka ọ zuo ike maka nkeji ole na ole tupu anyị ewepụ anụ na ngaji.
Mgbe zukini na-esi nri, iri yabasị nke ọma belata were ya ghee ya n’ite eji eghe mmanu.
Mgbe yabasị dị nro, ịgbakwunye zukini anụ, tomato na tuna, oge ma sie ha dum maka nkeji ole na ole.
N'ikpeazụ, anyị juputara zukini na ngwakọta, anyị tinye chiiz n'elu na gratin ruo mgbe chiiz gbazee.
Anyị na-ejere zucchini nri na tuna na chiiz, na-ekpo ọkụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » Ntụziaka pụrụ iche » Ntụziaka dị mfe » Zucchini juputara na tuna na chiiz